केपी ओलीको सम्पत्ति कति ? कुन मन्त्री कति धनी गरीब ? (हेर्नुहोस् सूची) - Deshko News Deshko News केपी ओलीको सम्पत्ति कति ? कुन मन्त्री कति धनी गरीब ? (हेर्नुहोस् सूची) - Deshko News
केपी ओलीको सम्पत्ति कति ? कुन मन्त्री कति धनी गरीब ? (हेर्नुहोस् सूची)
काठमाडौँ जेठ १०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको सम्पत्ति विवरणमा ४२ लाख रुपैयाँबाहेक बाँकी सबै सम्पत्ति श्रीमती राधा शाक्यको नाममा रहेको देखाइएको छ ।
रु ४२ लाख भने प्रधानमन्त्री ओलीले तलबमार्फत आर्जन गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, श्रमती राधाको नाममा भक्तपुरमा डेढ रोपनी र झापामा १० कठ्ठा जमिन रहेको छ । भक्तपुरमा एक रोपनीमा बनेको ढाई तलाको पक्की भवन समेत सम्पत्ति विवरणमा देखाइएको छ ।
राधाका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति स्वआर्जन भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, राधाको नाममा रु १० लाख माछापुच्छे बंैक र प्रभु बैंकमा रहेको देखाइएको छ । उहाँको नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुँदा रु २५ लाख राष्ट्रिय बचत पत्रमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको मोरङ विराटनगर १२ मा एक कट्ठा जमिनमा ५ कोठे घर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।
उहाँले आफूसँग पुरानो एक थान साइकल रहेको पनि जनाउनुभएको छ । त्यसैगरी, कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको श्रीमतीका नाममा काठमाडौंमा अढाइ तले घर रहेको छ । मन्त्री तामाङको सिन्धुपाल्चोक, मोरङ र खोटाङमा जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।